U.kyaw.nyein.vs.u.nu.and.general.ne... by Zaw Aung 861 views
Customers expectation by Steven Myat 364 views
Live Music: Android App Arena 83 by Android App Arena 16614 views
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စံနမူနာ၊ အင်ဒိုနီးရှားဒီမိုကရေစီ... ဂျိုကိုဝီဒိုဒို
မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတသစ်၊ အစိုးရသစ်
- စစ်တပ်မဟုတ်သူ ၂၀၁၅မှာ ဖြစ်နိုင်သလား? အင်ဒိုနီးရှားမှာ ၁၆နှစ်ကြာမှ အရပ်သားအစိုးရရွေးခံရပါတယ်။
သမ္မတရွေးကောက်ခံရသူ ဂျိုကိုဝီဒိုဒို ခရီးစဉ် - စာမျက်နှာ ၁-၁၉
Min Thar at own business
1. မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတသစ်၊ အစိုးရသစ် - စစ်တပ်မဟုတ်သူ ၂၀၁၅မှာ ဖြစ်နိုင်သလား? အင်ဒိုနီးရှားမှာ ၁၆နှစ်ကြာမှ အရပ်သားအစိုးရရွေးခံရပါတယ်။ သမ္မတရွေးကောက်ခံရသူ ဂျိုကိုဝီဒိုဒို ခရီးစဉ် - စာမျက်နှာ ၁-၁၉ အင်ဒိုနီးရှား စီးပွားရေးဝန်ကြီး (သမ္မတ ယူဒိုယိုနို ခန့်ခဲ့သူ) - စာမျက်နှာ ၂၀-၂၂ အင်ဒိုနီးရှားမှာတော့ ဂျိုကို ဆိုတဲ့ အရပ်သား၊ သမ္မတကို ၂၀၁၄မှာ ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်ပါပြီ။ ၁၉၉၈ခုနှစ် အင်ဒိုနီးရှား စစ်အာဏာရှင် ဆူဟာတို ပြုတ်ကျသွားပြီး သမ္မတအဆက်ဆက်ကတော့ ၁၉၉၈ - ဟာဗီဘီ (ဆူဟာတို မွေးစားသား) စာမျက်နှာ - ၂၃ ၁၉၉၉ - ဝါဟစ် (ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်) စာမျက်နှာ - ၃၂ ၂၀၀၁ - မဂ္ဂဝါသီ (ဝါဟစ် နေရာဆက်ခံရသည်) စာမျက်နှာ - ၄၈ ၂၀၀၃ - ယူဒိုယိုနို (ရွေးကောက်ခံသည်၊ ၂ကြိမ်) စာမျက်နှာ - ၅၅ ၂၀၁၄ - ဂျိုးကို ဝီဒိုဒို (အရပ်သား၊ စစ်တပ်နှင့်ကင်းရှင်းသူ) စာမျက်နှာ - ၆၈ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံမှာ လူမျိုးပေါင်း ၃၀၀ကျော်ရှိပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံလိုပဲ လက်နက်ကိုင်၊ လူမျိုးစုများစွာကို စုစည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
2. 9/28/2014 In Southeast Asia အရှေ့တောင်အာရှမှာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဒီမိုကရေစီစံပြမဖြစ်နိုင်ပါ (ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး) ဒီမိုကရေစီနည်းနဲ့ရွေးခံရတဲ့ ဂျိုကဝိုဒီဒိုနောက်လမှာ၊ သမ္မတအဖြစ် ကျ မ်းသစ္စာဆမိုယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အပြောင်းလဲကာလမှာတေ့ာ အင်ဒနိုီးရှားမှာ အတိတ်က အရပ်ိဆိးုများ ပေါ်နေပါတယ်။ အခြေခံဥပဒေခံရုံုးမှာ ရွေးကောက်ပွဲရံှးုသွားတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းလဲဖြစ်၊ အာဏာရင်ှသမ္မတဟောင်း၊ ဆူဟာတရိဲု့ သားမက်လဲဖြစ်ခဲသူ့က ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ပြောင်းဖို့ လျှောက်ထားပါတယ်။ ရံုးအပြင်ဖက်မှာတေ့ာ အာဏာရှင်ဟောင်းထောက်ခံသူများနဲ့ လက်ရှိအရွေးခံသမ္မတ ဂျိုးကိုဝီဒိုဒို ထောက်ခံသူများ ပဋိပက္ခဖြစ်ပြီး၊ အဓိကရုံးနှိမ်နင်းရဲတွေက ရေပိုက်၊ မျ က်ရည်ယိုဗုံးများသုံးပြီး၊ လူစုခွဲနေရပါတ်။ နောက်ဆံုးတေ့ာ အခြေခံဥပဒေခံရုံုးက သမ္မတဂျိုကဝိုဒီဒိုရွေးချယ်ခံရမှုကိုအတည်ပြုပေးလိုက်လို့ ပြီးသွားပါပြ။ီ အင်ဒနိုီးရှားသမငိုးမှာတေ့ာ အကျိတ်အနယ်အဖြစ်ဆံုး သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ငြမိ်းချမ်းစွာနဲ့ပြီးဆံုးသွားတဲ့အတွက် ဂျာကာတာမြုိ့တေ်ာဝန်ဟာ ပါလမီန်မှာ ကျ မ်းသစ္စာဆရိုတေ့ာမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ အင်ဒနိုီးရှားမှာ ဒမီိုကရေစစီနစ်နဲ့ အာဏာကို ငြိမ်းချမ်းစွာလွှဲပြောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ http://mingalaronline.biz/stories/in.do.nesia.aug2014.htm 1/9
3. 9/28/2014 In Southeast Asia ဂျာဗားအနောက်ပိုင်းပြည်နယ်မှာ မဲပေးဖို့လူများတန်းစီနေပုံ Credit Bay Ismoyo/Agence France-Presse — Getty Images ထိုင်းနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က ဒီမိုကရေစီကျ စွာရွေးကောက်ထားတဲ့ အစိးုရကိုအာဏာသမိ်းဖြုတ်ချခဲပ့ါတယ်။ ၈နှစ်အတွင်း ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ မလေးရှားနဲ့ ကမ္ဘောဒီယားတွေမှာလဲ မနှစ်က ရွေးကောက်ပွဲမှာ လက်ရှိအစိုးရက မသမာလုပ်ဆောင်တယ်လို့ အတိုက်အခံများကစွတ်စွဲထားပါတယ်။ မလေးရှား၊ ကမ္ဘောဒီယား နဲ့ စင်ကာပူအပါအဝင် ဘယ်သောခါမှာ ဒီမိုကရေစီကျ စွာ ရွေးကောက်ပြီး၊ အတိုက်အခံကိုအာဏာလြွှဲခင်း မရခှိဲဖ့ူးပါဘူး။ ဖိလစ်ပငိုနငိုငံမှာ ဒမီိုကရေစီကျ စွာ ရွေးကောက်ပွဲကျ င်းပခဲပေ့မဲ့၊ အကြမ်းဖက်မမျှုားစွာနဲ့ ကျ င်းပလေ့ရပှိါတယ်။ ယခင်သမ္မတဟောင်း ၂ယောက်ကိုလဲ၊ နောက်တက်လာတဲ့ သမ္မတလက်ထက်မှာ ဖမ်းဆီး၊ထောင်ချခြင်း အဖြစ်ပျ က်တွေရှိပါတယ်။ အဲဒနီငိုငံများက ဒမီိုကရေစနီငိုငံများဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပါတစီနစ်နဲ့ ကွန်မြူနစ်များအပ်ုချုပ်တဲ့ ဗီယက်နမ်းနငိုငံနဲ့၊ နောက်တစ်နငိုငံကတေ့ာ စစ်အာဏာရင်ှစနစ်က ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့မြန်မာနငိုငံတို့ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဒနိုီးရှားမှာတေ့ာ ဧပြီလ ၂၀၁၄မှာ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကျ င်းပခဲတ့ာ၊ လဦူးရေ သန်းပေါင်း ၁၄၀ မဲပေးခြဲ့ကပါတယ်။ မဲပေးပငိုခွင့်ရှိသူအားလံုးရဲ့ ၇၅% မဲပေးတယ်လို့ဆပိုါတယ်။ ပြုင်ိဆငိုတဲ့ ပါတီအားလံုးက ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို လက်ခံကြပါတယ်။ အခချုန်ိမှာတေ့ာ အင်ဒနိုီးရှားဟာ အရှေ့တောင်အာရမှာ ဒမီိုကရေစီအရှိဆံုး နငိုငံဖြစ်နေတာကို ဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ပါဘူး။ ဒါမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့ ၁၉၉၈ခုနှစ် အာဏာရှင်ဆူဟာတို နှုတ်ထွက်သွားချိန်က ဘယ်သမူမှခန့်မနှ်း၊ မမျေ်ှာလင့်ခဲဘ့ူးလို့ သြစကြေးလျှား အမျုိးသားတက္ကသိုလ်က အင်ဒနိုီးရှားစပယ်ရှယ်လစ် http://mingalaronline.biz/stories/in.do.nesia.aug2014.htm 2/9
4. 9/28/2014 In Southeast Asia လေ့လာသူ၊ မားကပ်စ်မစ်ဇာ ဆိုသူကပြောပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားမှာ ပြုပြင်စရာများရှိနေပါသေးတယ်။ အကျ င့်ပျ က်ခြစားမှုဟာ နိုင်ငံရဲ့သန်း၂၅၀ လူဦးရေအတွက် ရိုးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးလူနည်းစုအဖွဲ့အစည်းများလဲ အကြမ်းဖက်မှု၊ လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ လူအခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ဝင်များဟာ အစိုးရလုံခြုံရေးတပ်များရဲ့ နှောင်ယှက်မှုများခံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့၊ အရင်က လူ့အခွင့်ရေဖောက်ဖျက်မ၊ှု ဆိးုဝါးတဲ့နေရာများစွာမှာ အခုအခါ လူ့အခွင့်ရေးတိးုတက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ဒီမိုကရေစီအောင်မြင်မှုဟာ ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မတူပါဘူး။ ဆူဟာတို အလွန်ခေတ်မှာ အရပ်သားခေါင်းဆောင်များဟာ စစ်ဗိုလ်များကို နိုင်ငံရေးလောကမှ ထွက်ခွာစေလိုက်ပါတယ်။ ဥပဒေပြု အ၇ပ်သားပညာရင်ှများဟာ စစ်တပ်ကိုပါလမီန်နေရာများကနေ ဖယ်ရှားပစ်နငိုခြဲ့ပီး တိုက်ရိုက်ရွေးကောက်ပွဲတွေ သမ္မတ ကနေ မြုိ့တေ်ာဝန်အထိကျ င်းပပေးနငိုခဲပ့ါတယ်။ စစ်ဗိုလ်များကိုအစိးုရအဖွဲ့အစည်းရဲ့ အရာရြှိကီးများမလပ်ုဖို့ ဥပဒေပြဌာန်း၊ တားမြစ်နငိုခဲပ့ါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်ကြီးရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပါ မစွန့်မနေရ၊ စွန့်လွှတ်ပြီး၊ ပုဂ္ဂလိကထံ ရောင်းချစေနငိုခဲပ့ါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံစစ်တပ်ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ ထိုင်းနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာ စစ်တပ်က အမြဲတပ်ပါဝင်စွတ်ဖက်လေ့ရှိတာကို တွေ့ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်ထိ စွတ်ဖက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၃၀ နောက်ပိုင်းမှာ တစ်ဒါဇင်လောက် စစ်တပ်၊ အာဏာသမိ်းခြင်း လပ်ုခြဲ့ကပါတယ်။ ဒါဟာ စစ်တပ်က တငိုးပြည်ကာကွယ်ရေးကပိဲုလပ်ုဆောင်တယ် ဆိုပြီးအာဏာသိမ်းလေ့ရှိပါတယ်။ အင်ဒနိုီးရှားမှာ အရေပါတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကတေ့ာ ဆူဟာတိုအာဏာစွန့်သွားပြီး၊ တစ်နစ်ှအတွင်းမှာ ပြည်နယ်အစိုးရများကို လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ဗဟိုဦးစီးစနစ်ကသွေဖယ်သွားစေခဲပါတယ်။ ပါတြီကီးတစ်ခုက နငိုငံရေးကြိုကီးစိးုဖို့ခက်ခဲသွားစေခဲပ့ါတယ်။ ပါတငီယ်များလဲ ရွေးကောက်ပွဲရံှးုပေမဲ့၊ ဆက်လက်အသက်ရင်ှသန်ခွင့် ရရှေိစပါတယ်။ ရံှးုသွားတဲ့ပါတငီယ်များကိုအနငိုရရှိတဲ့ပါတီက ဖျက်သမိ်းပစ်စေတာမျုိးကိုတားမြစ်ခဲပ့ါတယ်။ ဗဟေိုရွးကောက်ပွဲမှာ ရံှးုပေမဲ့၊ ပြည်နယ်၊ဒေသတွေမှာ အပ်ုချုပ်ခွင့်ဆက်လက်ရရှေိစပါတယ်။ ကိုယ်ပငိုအပ်ုချုပ်ခွင့်ရတဲ့ ပြည်နယ်၊ဒေသများမှာ အကျ င့်ပျက်ခြစားမနှဲု့ ဒေသခံခေါင်းဆောင်တစ်ဒါဇင်ခန့်အရေးယူခံရပါတယ်။ မစ္စတာဂျိုကိုကတေ့ာ မှတ်သားဖွယ်ရာ ဒေသခံခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗဟဂျိုာဗားပြည်နယ်က ဆရူာကာတာမြုိ့မှာမွေးဖွားခြဲ့ပီး၊ ၅၃နစ်ှအရွယ်မှာ ဒုတိယအကြမ်ိမြောက် မြုိ့တေ်ာဝန်အဖြစ်ရွေးခံခဲရ့ပါတယ်။ တချန်ိထဲ ၂၀၁၂ မှာ ဂျာကာတာမြုိ့တေ်ာဝန်အဖြစ်လဲ အရွေးခံရပြီး၊ နငိုငံကေိုခါင်းဆောင်ဖို့ အရည်အချင်းပြည့်ဝကြောင်း ပြသနငိုခဲပ့ါတယ်။ http://mingalaronline.biz/stories/in.do.nesia.aug2014.htm 3/9
5. 9/28/2014 In Southeast Asia သူဟာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ အာဏာရှင်ဆူဟာတိုနဲ့ ကင်းရငှ်းတဲ့ ပထမဆံုးသမ္မတအဖြစ် သမိုင်းဝင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ သူဟာ အောက်တိုဘာ ၂၀ရက်နေ့မှာ ကျ မ်းသစ္စာဆိုမယ်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိသမ္မတဖြစ်သာ ဆူစီလို ဘမ်ဘန်း ယူဒိုရိုနို တက်ရောက်ပါမယ်။ ယူဒိုရိုနို ဟာ သမ္မတသက်တမ်း ၂ကြိမ်းထမ်းဆောင်ပြီးဖြစ်လို့၊ အခြေခံဥပဒေအရ သမ္မတထပ်မံ အရွေးခံခွင့်မရှေိတ့ာပါဘူး။ ဒီလိုအာဏာဆက်မယနူငိုအောင် ဥပဒေအရ တားမြစ်ထားခြင်းကို မလေးရှား၊ ကမ္ဘောဒီယား၊ စင်ကာပူတို့မှာ မတွေ့ရပါဘူး။ ဒနီငိုငံတွေမှာ အာဏာရပါတီက အပ်ုချုပ်တာနစ်ှပေါင်းကြာမြင့်နေတဲ့အတွက် အင်ဒနိုီးရှားလို အာဏာလွှဲပေးဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး..လို့..စင်ကာပူ နိုင်ငံတကာအင်စတီကျုSingapore Institute of International Affairs, ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဆိုင်မွန်တေး ကပြောပါတယ်။ ဒါမျိုး နိုင်ငံရေးအပြောင်းလွှဲ လုပ်ရပ်တွေကို လုပ်လေ့မရှိပါဘူးလို့လဲ ဆိုင်မွန်တေးက ထပ်မံပြောပါတယ်။ အင်ဒနိုီးရှားကတေ့ာ အတိုက်ခံကိုအာဏာလွဲှေပြာင်းရေးဟာ ပြသနာမရှေိကြာင်း လက်တွေ့ပြလိုက်ပါပြ။ီ ဒမီိုကရေစစီနစ် စတင်ပြောင်းလဲတဲ့ ပထမနစ်ှမှာ နငိုငံသားများစွာ သွေးထွက်သံယမိုမျှုားနဲ့ လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒြပခြဲ့ကပါတယ်။ လမျူားထောင်နဲ့ချြီပီးသေဆံုးခဲရ့ပါတယ်။ အစ္စလမ်ဘာသာရေး အကြမ်းဖက်မမျှုား၊ စစ်သွေးကြွသမျူားကြောင့် စစ်တပ်က အရပ်သားထံကိုအာဏာလွဲှေပးဖို့ စိးုရမ်ိခြဲ့ကပါတယ်။ အနစှ်၄၀အတွင်း ပထမဆံုး ဒမီိုကရေစနီည်းနဲ့ ရွေးကောက်ခံရတဲ့ သမ္မတဝါဟစ် တက်လာပြီး၊ ၂၀၀၁ခနုစ်ှမှာ တာဝန်မကြေမ၊ှု အကျ င့်ပျ က်မှုများနဲ့ သမ္မတရာထူးကနေ ဖယ်ရှားခံလိုက်ရပါတယ်။ ဒု-သမ္မတဖြစ်သူ မဂါဝတီ သမ္မတဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ပါလမီန်အတွင်းမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲပ့ါတယ်။ အရင်က အာဏာရင်ှဆူဟာတိုလက်ထက်မှာတေ့ာ သမ္မတအဖြစ် ကေ်ာမတီကရွေးချယ်ခဲပေ့မဲ့ ၂၀၀၄မှာ ပထမဆံုး ပြည်သူလူထမှုတိုက်ရိုက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့သမ္မတအဖြစ် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ယဒူရိုနို ရွေးချယ်ခံရပါတယ်။ ထိုအချန်ိက လက်ရှိသမ္မတဖြစ်သူမဂါဝတီဟာ အင်ဒနိုီးရှားနငိုငံစတင်ခဲတဲ့ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆူကာနိုရဲ့သမီး ဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတရွေးပွဲ ရှုံးနိုမ့်ပြီး၊ အာဏာလွှဲပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုပြီးသွားတဲ့ အင်ဒနိုီးရှား သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဟာ လွတ်လပ်ပြီး၊ တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲလို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ ရံှးုသွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ပရာဗမိုဆူဘင်တိုအရံှးုကိုလက်ခံခဲပေ့မဲ့၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲမသမာမှေုတွရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ပရာဗမိုက အခြေခံဥပဒေရံုးအထိတင်ပြကန့်ကွက်ခဲပေ့မဲ့၊ ပယ်ချခြင်းခံရပါတယ်။ သူ့နောက်က ရပ်တည်ပေးတဲ့ ညွန့်ပေါင်းအစိးုရ ပါတမျီားက ရွေးကောက်ပွဲကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နဲ့ စစ်ဆေးပေးဖို့ တောင်းဆိုနေပါတယ်။ ဒီလိုစံစုမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှာ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်စေတဲ့ အာဏာရပှိါတယ်။ နငိုငံရေးကျွမ်းကျ င်သမျူားကတေ့ာ ဒါမျုိး စံစုမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဖြစ်လာဖို့ အလားအလာနည်းပါးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆေိုတ့ာ ပရာဗမိုဘက်သား ပါတီအချုိ့ဟာ ဂျိုကိုရဲအ့စိးုရမှာ နေရာရမယ် လို့ မျေ်ှာလင့်နေတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒပီါတငီယ်များ ဂျိုကိုဘက်ရောက်သွားရင် ပါလမီန်မှာ ဥပဒေပြုမှုကို http://mingalaronline.biz/stories/in.do.nesia.aug2014.htm 4/9
6. 9/28/2014 In Southeast Asia ဂျိုကိုအုပ်စုက ကြီးစိုးသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပရာဗမိုကတေ့ာ ရွေးကောက်ပွဲရံှးုတာကိုလက်မခံချင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ အမြဲတမ်းအတိုက်အခံမဟာမိတ် အဖွဲ့ဟာ ရက်များမကြာမီ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာမှာပါလို့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရေးသိပ္ပံ၊ ဂျာကာတာမြို့မှာ နူဆာဘာတီ ကပြောပါတယ်။ အင်ဒနိုီးရှားဟာ လဦူးရေအများပြားဆံုး၊ အထူထပ်ဆံုး မွတ်ဆလင်နငိုငံဖြစ်ပြီး၊ လမျူုိးစေုပါင်း ၃၀၀ကျေ်ာ ကွဲပြားစွာရှိနေပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ် အရပ်သားအစိုးရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ခရီးစဉ်ကို စစ်တပ်ကလက်ခံခြင်းဟာ အဓိကမှတ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ September 5, 2014, on page A12 of the New York edition , In Southeast Asia, Indonesia Is an Unlikely Role Model for Democracy By JOE COCHRANESEPT ဘာသာပြန်ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ိနိုင်ငံပင် ဒီမိုကရေစီပြောင်းနိုင်သည်.. မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်ကဘာအခက်ခဲရှိပါသနည်း...။ (မိုးမခဆောင်းပါး) In Southeast Asia, Indonesia Is an Unlikely Role Model for Democracy By JOE COCHRANESEPT. 4, 2014 Photo Gov. Joko Widodo of Jakarta will be sworn in as Indonesia’s president next month. Credit Darren Whiteside/Reuters Continue reading the main storyShare This Page Continue reading the main story JAKARTA, Indonesia — Forawhile, it looked as if Indonesia’s bad old days had returned. The Constitutional Court was hearing an appeal by the losing presidential candidate,aformer army general and son-in-law of Indonesia’s former dictator, who charged that the election last July had been rigged and should be overturned. Outside, his supporters clashed with the riot police and tried to storm the court building. The police fired water cannons and tear gas. But when the justices issued their ruling denying the appeal last month, something strange http://mingalaronline.biz/stories/in.do.nesia.aug2014.htm 5/9
7. 9/28/2014 In Southeast Asia happened: The losing candidate grudgingly accepted defeat. The most competitive presidential election in Indonesian history had come toadramatic and peaceful end. Next month, Joko Widodo, the governor of Jakarta, will be sworn in at the Parliament building, completingastunning rise fromachild of the slums and carpenter to leader of the world’s fourth-most-populous nation. Sixteen years after Suharto, the authoritarian president whose corrupt and brutal military-backed government ruled the country for 32 years, was forced to resign amid violent pro-democracy protests, Indonesia has becomearole model for peaceful, democratic transfers of power in Southeast Asia,aregion where they are becoming increasingly rare. Photo Indonesians lined up to vote in the country’s presidential election in the village of Bojong Koneng in Bogor, West Java Province, in July. Credit Bay Ismoyo/Agence France-Presse — Getty Images In Thailand, the military overthrewademocratically elected government in May for the second time in eight years. Malaysia and Cambodia have been mired in political turmoil since parliamentary elections last year, which the opposition in each country claims were rigged. Neither Malaysia, Cambodia nor Singapore has ever hadademocratic handover to the political opposition. The Philippines has had democratic elections, but they have tended to be tainted by fraud and violence, and the last two presidents jailed their predecessors. And those are the democracies. Vietnam has enforced one-party Communist rule since unification, and Myanmar is taking its first, tentative steps toward openness after decades of military rule. Indonesia, however, in addition to the presidential election, held successful general elections in April in which nearly 140 million people cast ballots,aturnout of 75 percent. All of the competing parties accepted the results. http://mingalaronline.biz/stories/in.do.nesia.aug2014.htm 6/9
8. 9/28/2014 In Southeast Asia “There is no doubt that Indonesia is now Southeast Asia’s most democratic nation, and this is something no one would have predicted in 1998,” said Marcus Mietzner, an Indonesia specialist at Australian National University. Indonesia’s record on other fronts still leaves room for improvement. Corruption remains endemic in the nation of 250 million, religious minorities face discrimination and violence and, according to Human Rights Watch, members of the state security forces still enjoy “widespread impunity” for serious human rights abuses. But most of those areas, too, reflect enormous progress since the dictatorship era. A central reason for Indonesia’s success is that, unlike in Thailand, post-Suharto civilian leaders in Indonesia sidelined the armed forces from politics. Lawmakers passed constitutional amendments that stripped the military of its reserved bloc of seats in the House of Representatives and ushered in direct elections, from president all the way down to mayor. Continue reading the main story Serving military officers were barred from government posts and political party activities, and ultimately, Indonesia’s armed forces were forced to sell off their commercial business interests. Thailand’s military, on the other hand, has repeatedly asserted its power during political crises throughout the country’s modern history — there have beenadozen successful coups since the 1930s — and it draws its legitimacy from portraying itself as the sole guardian of the monarchy. Another crucial democratic advance for Indonesia, experts say, was its bold move to regional autonomy across the far-flung archipelagoayear after Suharto’s resignation in May 1998. That decentralization of power broke Jakarta’s political monopoly and prevented the emergence ofanew, dominant national political force. It also gave smaller political groupsaway to survive even if they failed to winanational election. “Forces that lose out in the center can still hold power in provinces and districts, making them accept the outcome of political contests,” Mr. Mietzner said. http://mingalaronline.biz/stories/in.do.nesia.aug2014.htm 7/9
9. 9/28/2014 In Southeast Asia To be sure, the move toward regional autonomy was also chaotic, blighted by the convictions of dozens of regional leaders for corruption. Mr. Joko, however, isanotable example of its success. Born inariverside slum in the Central Java city of Surakarta, the 53-year-old craftsman was twice elected mayor and used his election as governor of Jakarta in 2012 to catapult himself onto the national political stage. He will be the first president in Indonesian history not to have come from its Suharto-era political elite or to beaformer army general, and the first to assume the presidency having experience runningagovernment. He will be sworn in on Oct. 20 inaceremony to be attended by the departing president, Susilo Bambang Yudhoyono, who was constitutionally barred from seekingathird term. Suchatableau has never been seen in Malaysia, Cambodia or Singapore. Simon Tay, chairman of the Singapore Institute of International Affairs, said the notion of handing over power toapolitical opposition had become an alien concept in those countries because their respective leaders and governing parties had been in power so long. “It’s the whole establishment, and they are not used to anything else,” Mr. Tay said. “The nature of political change would be very sweeping, and there isafear that their countries as they know them would not survive.” Indonesia has proved that this does not have to be the case. The first years of democratization were tumultuous, characterized by bloody nationwide street protests, ethnic and sectarian unrest that killed thousands, terrorist attacks by homegrown Islamist militants and reluctance by the country’s feared armed forces to bend to civilian rule. The country’s first democratically elected leader in four decades, Abdurrahim Wahid, was impeached in 2001 after less than two years in office on allegations of corruption and incompetence, after tense political battles with his rivals in Parliament. Continue reading the main storyContinue reading the main storyContinue reading the main http://mingalaronline.biz/stories/in.do.nesia.aug2014.htm 8/9
10. 9/28/2014 In Southeast Asia story Yet Indonesia persevered, and in 2004, voters chose Mr. Yudhoyono in the first direct presidential election in the country’s history. Previously, presidents had been chosen byalegislative body tightly controlled by Suharto. Mr. Yudhoyono’s opponent, Megawati Sukarnoputri, the incumbent president and eldest daughter of Indonesia’s founder, Sukarno, accepted defeat and stepped down, although she refused to attend his inauguration. Indonesia’s latest election has not been wrinkle-free. The loser, Prabowo Subianto, conceded defeat, but he continues to claim that the election was marred by massive fraud. After the Constitutional Court ruled against him, Mr. Prabowo sued the government in the State Administrative Court, which rejected his suit last week. And the coalition of political parties that backed his campaign, which will haveamajority when Parliament convenes in October, has threatened to formaspecial committee to investigate the election. While suchapanel would have no legal authority to overturn the result, it could seek to dent Mr. Joko’s legitimacy before the House of Representatives. Political analysts, however, say this is unlikely because some of the parties in the coalition are expected to abandon Mr. Prabowo in the coming weeks and join Mr. Joko, giving himamajority and improving his ability to pass legislation. End... http://www.nytimes.com/2014/09/05/world/asia/in-southeast-asia-indonesia-becomes-a-role-model- for-democracy.html?_r=0 http://mingalaronline.biz/stories/in.do.nesia.aug2014.htm 9/9
11. 9/28/2014 JOKOWI Indonesia သစ်တောအင်ဂျ င်နီယာ၊ တခါကပရိဘောကလုပ်ငန်းရှင်၊ ဂျာကာတာအုပ်ချုပ်ရေးမှုး-လဘ်စားမှုကင်းသူ၊ လာဘ်စားသူများနဲ့လည်း အတူအလုပ်လုပ်နိုင်သူ၊ ပြည်သြူကားထဲဆင်းတဲ့၊ လူထနုငိုငံရေးသမား အင်ဒိုနီးရှားလူထုက သမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ ၅၃-၄၇% နဲ့နိုင်တယ်ဆိုတာ ရွေးကောက်ကေ်ာမရင်ှရဲ့ အတည်ပြုချက် စောင့်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရံှးုသွားတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ပရာဗဝိုက ၄၇%တောင် ရတယ်ဆေိုတ့ာ၊ စစ်အာဏာရင်ှများကိုထောက်ခံသူတေ်ာတေ်ာများတယ်။ တောရွာများက ပေးဆိုကြောက်လို့ပေးရတာတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ လူထုဆန္ဒယူပွဲ အစဦးမှာ ဂျိုကိုဝီ အပြတ်အသတ် ဦးဆောင်ခဲပေ့မဲ့၊ ရွေးကောက်ပွဲ၃ပတ်အလမှိုကျ မှငွေ-အာဏာရင်ှများက စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ပရာဗဝို ဝငိုးဝန်းပံ့ပိးုမှေုကြာင့် ၄၇%အထိကပ်လိုက်လာပါတယ်။ တကယ်မေးရေတွက်ချန်ိမှာလဲ ခန့်မနှ်းချက်အတငိုး ဖြစ်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ . ဂျိုကိုဝီ ပါတီက အနိုင်ရတယ် ကျေ ညာပြီး၊ ချက်ချင်းပဲ ပရာဗိုမို ပါတီကလည်း သူတို့အနိုင်ရပြီလို့ ကြေညာလိုက်ပြန်ပါတယ်။ အပ်ုစ၂ုခုတငိုးပြည်မငြမ်ိမသက်မဖြစ်အောင် စိတ်ရှည်စွာနဲ့ ရွေးကောက်ကေ်ာမရငှ် ထုတ်ပြန်ချက်ကိုစောင့်ကြပါလို့ လက်ရှိသမ္မတ ယဒိုရိုနိုက တစ်ဦးချင်းတွေ့ဆံုး ပြောဆခိဲုပ့ါတယ်။ အခု ရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့ ရက်အနည်းငယ်ကြာချနိ် နစ်ှဘက်အပ်ုစုဆပူမူမျှုားကိုထနိ်းချုပ်လျှက်ရပှိါတယ်။ . မြန်မာပြည်အတွက် အားရစရာပါပဲ။ အင်ဒိုနီးရှားမှာ လက်ရှိသမ္မတ ယိုဒိုရိုနို ၁၀နှစ် (၂ကြိမ်သက်တမ်း) လပ်ုခဲသူ့က စစ်တပ်အရာရမျှိားကိုထမ်ိသမိ်းပေးပါတယ်။ တရာမျှတမှုကိုဖြစ်စေပြီး၊ သြီခားလွတ်လပ်တဲ့ မဲရေတွက်၊ ခန့်မနှ်းတဲ့အဖွဲ့များကလည်း တရားမျှတရေးအတွက် လပ်ုဆောင်ပေးခြင်း၊ မဲလမ်ိခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကြိုတင်မဲ ပုံစံ နည်းပါတယ်။ ရလဒ်တွေ ပြောင်းဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ ၂၀ကျေ်ာ ရပှိါတယ်။ ၂၀၁၅ မြန်မာရွေးကောက်ပွဲ ကြီးကြပ်မဲ့ စစ်တပ်အရာရမျှိား တရားမျှတစွာ ကျ င်းပပေးမဲ့ http://mingalaronline.biz/stories/jokowi.role.model.htm 1/10
12. 9/28/2014 JOKOWI Indonesia အလားလာတွေ့ရပါတယ်။ . ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ခြင်း၊ စကားပြောခြင်းများမှာ သမ္မတလောင်း ၂ဦးစလုံး ပြည်သူလူထုနဲ့ ထိတွေ၊ သူတို့ယဉ်ကျေးမှုအရ ဘယ်ညာ၊ ပါးချင်းထိ၊ လက်နဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်း၊ ကလေးများကို နမ်းရှုံ့နှုတ်ဆက်ခြင်း စတဲ့း လူထုနဲ့နီကပ်စွာ ဆက်ဆံခြင်းများဟာ အလွန်အားကျ စရာကောင်းပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း၊ သန်းကြွယ်မဟာသေူဌးကြီး ၊ ပရာဗမိုလည်း ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ ဟန်ပန်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ . ရွေးကောက်ကေ်ာမရငှ် ကျေ ညာတဲ့ 22-Jul-2014 အဆံုးထေိစာင့်ကြည့်ရပါတယ်။ အများစုကတေ့ာ (ငွေ- အာဏာရင်ှများ မတရား မလပ်ုနငိုရင်တေ့ာ) ဂျိုကဝီုအနငိုရရှိသွားပြီလို့ ဆံုးဖြတ်ကြပါတယ်။ . Indonesian presidential candidate Joko Widodo, popularly known as "Jokowi", left, and his wife Iriana, show their inked fingers after casting their ballots during the presidential election in Jakarta, Indonesia, Wednesday, July 9, 2014. As the world's third-largest democracy began voting Wednesday to electanew president, Indonesians are divided between two very different choices:aone-time furniture maker, Jakarta Governor Joko Widodo, andawealthy ex-army general with close links to former dictator Suharto, Prabowo Subianto. သြစတြေလျ ဝန်ကြီးချုပ် Aony Abbott ကတေ့ာ ငြမိ်းချမ်းစွာပြီးသွားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကိုချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။ ဆစ်ဒနေအခြေစိုက် အကဲဖြတ်များကတေ့ာ ဂျိုကိုအနငိုရသွားပြီလို့ ပြောကြပါတယ်။ ဂျိုကိုဟာ သြစကြေးလျားလူထုနစ်ှသက်သြူဖစ်ပါတယ်။ အင်ဒနိုီးရှားပြည်သူလူထုကလဲ စစ်အာဏာရင်ှအရပ်ိရှိတဲ့ ပရာဗိုမို ထက်၊ အရပ်သားမျ က်နှာသစ် ဂျိုကို ကိုပဲ ကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သြစတြေးလျားနဲ့အင်ဒိုနီးရှား နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး အဆက်အသွာ များစွာရှိနေပါတယ်။ (Jakata Globe) မိုးမခသတင်းဆောင်းပါး (Photo: AP Photo/Dita Alangkara) http://mingalaronline.biz/stories/jokowi.role.model.htm 2/10
13. 9/28/2014 JOKOWI Indonesia http://mingalaronline.biz/stories/jokowi.role.model.htm 3/10
14. 9/28/2014 JOKOWI Indonesia ******************* This story, posted at Moemaka ဇူလိုင်၉ရက်တွင် အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲကျ င်းပတေ့ာမည် အင်ဒနိုီးရှားသည် လဦူးရေသန်းပေါင်း ၂၄၀ကျေ်ာ၊ ကျွန်းပေါင်း တစ်သောင်းခနုစ်ှထောင်ကျေ်ာ၊ မဲပေးနငိုသူ၇၅သန်း မှ တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်တေ့ာမည်ဖြစ်သည်။ အရပ်သားအင်ဂျင်နီယာဘဝမှာ ဂျာကာတာမြုိ့ဝန်သို့ တက်လမှ်းလာခဲ့သူဂျိုကဝီုဟေုခ်ါခံရသနူငှ့်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဘဝမှ အစိုးရဝန်ကြီး၊ ရာထူးကြီးများရရှိလာသူ ပရာဗိုမို တို့ပြိုင်ကြမည်။ ဆန့်ကျ င်ဘက်၊ အသွင်မတူသူ ၂ဦး၊ တစ်ဦးကို ပြည်သူများက သမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရပေတေ့ာမည်။ လက်ရှိသမ္မတ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ယဒိုယနိူုသည် ၅နစှ် ၂ကြမ်ိသမ္မတရွေးခံရပြီးသည့်နောက်၊ ထပ်မံအရွေးမခံရတေ့ာပေ။ ၁၉၉၈ အင်ဒိုနီးရှား အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း၊ ဆူဟာတို မဖြစ်မနေ၊ အနားယူသွားပြီးနောက် သမ္မတ၄ဆက် တာဝန်ယခူဲ့ကြသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလည်း နစ်ှစဉ်ပြောင်းလဲမှုလပ်ုခဲ့ပြီး လွှတ်တေ်ာတွင် စစ်တပ်ပါဝင်မှုကို လျေ့ှာချခဲ့သည်။ သမ္မတကိုလည်း တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်သော စနစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ စစ်တပ်နငှ့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းများ နငိုငံရေးတွင် စိးုမိးုနေဆဲဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ယခု၁၀နစှ် သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော SBY ဟုခေါ်ကြသော သမ္မတယဒိုယနိုသည် အဂတိလိုက်စားမှုကိုတိုက်မည်ဟုလက်သီးလက်မောင်းတန်းကာ သမ္မတဖြစ်လာခဲ့သည်။ လက်ရှိအာဏာနှင့်ရာထူး ရရှိထားသူများ၏ ဖိအားပေးမှုကို သမ္မတကိုယ်တိုင် တောင့်မခံနိုင်သောကြောင့်၊ အဂတိလိုက်စားမှုများကို ပြောသလို၊ လုပ်မရနိုင်ဖြစ်နေသည်။ အင်ဒိုနီးရှားအချ မ်းသာဆုံး Bakris ဆိုသူ သူဌေးကြီးကို ဂိုကာပါတီက ဥက္ကဌခန့်ထားပြီး၊ နာမည်ပျ က်များထွက်နေသည့်ကြားက သူ့ကိုပင် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ ညီညွတ်ရေးဟု ဆိုကာ၊ သူ့ကိုပင် ရာထူးကြီးကို တိုးပေးထားရသည်။ နာမည်ကောင်းရပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလိုလားသော ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Sri Mulyani ကိုရာထူးမဖှယ်ရှားခံရသည်။ PR ရွေးကောက်ပွဲကိုကျ င့်သံုးသောကြောင့် သမ္မတ၏ ပါတီလည်း လွှတ်တေ်ာတွင် မဲအများစုမရှိသဖြင့် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖြစ် အုပ်ချုပ်နေရသည်။ ထို့ကြောင့် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျ က်ရေးမှာ ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်သည်။ ခြုံကြည့်လျ ငှ် သမ္မတ ယဒိုရိုနိုအစိးုရသည် ဒမီိုကရေစီလမ်းကိုအတငိုတာတစ်ခုအထိ ဖေ်ာဆောင်နငိုခဲ့ပါသည်။ အမြင်ချ င်းမတူသော သမ္မတလောင်း ၂ဦးမှာ တီဗွီစကားစစ်ထိုးခြင်း ၅ကြိမ်လုပ်ပြီးသွားပြီ ဖြစ်သည်။ မဲစစ်တမ်းကောက်မမျှုားတွင် ယခင်က ဂျိုကဝီုအပြက်အသာရရှေိသ်ာလည်း၊ ယခုအခါ ဂျိုကဝီုနှာတဖျားအသာဖြင့်သာ ဦးဆောင်နေသည်။ မည်သူအနငိုရမည် မသေချာတေ့ာ။ မဲဝယ် ရွေးကောက်ပွဲမသမာမမျှုားဖြင့် နည်းပါးမည်ဟုဆေိုသ်ာလည်း၊ စစ်တပ်အရာရှိများက ပရာဗိုမိုကို မဲထည့်ရန် ဆွယ်နေကြသဖြင့် သမ္ပတကိုယ်တိုင်က နိုင်ငံရေးလုပ်လိုပါက စစ်တပ်မှထွက်ပြီးလုပ်ရန် သတိပေးရသည်။ ဂျိုကိုဝီ မှာ ပြည်သူလူထုကြားသို့ ဟိတ်ဟန်မရှိ ဝင်ထွက်သွားလာ၊ အကြံယူပြီး အုပ်ချုပ်သည့်စနစ်ဖြစ်သည်။ ပရာဗိုမို မှာ ပြည်သူလူထုကို လမ်းညွှန်ပြသအုပ်ချုပ်သော စနစ်ဖြစ်သည်။ အဂတိလိုက်စားမှုများဖြင့် အောက်ခြေအဆင့်မှ၊ ထပ်ိတန်းရာထူးများအထိအဂတမိကင်းနငိုအောင် ဖြစ်နေသောကြောင့် နောက်အစိးုရတက်လာလျ ငှ် သိသာသော အပြောင်းအလဲများကိုပြည်သမျူားက မျေ်ှာလင့်ကြသည်။ အဂတိတိုက်ဖျက်ရေးကောမရငှ် (KPK) လည်း သမ္မတမှ http://mingalaronline.biz/stories/jokowi.role.model.htm 4/10
15. 9/28/2014 JOKOWI Indonesia အကာကွယ်မပေးထားသဖြင့် ထိထိရောက်ရောက် မဆောင်ရွက်နိုင်ဖြစ်နေသည်။ ထိုနှစ်ဦးကို ပြည်သူများက တိုက်ရိုက်ရွေးချ ယ် ကြမည်။ အင်ဒိုနီးရှား အပြောင်းလဲသည် မြန်မာပြည်အတွက် စံထားရသဖြင့်၊ မြန်မာနိုင်ငံရေးအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်ပါသည်။ မိုးမခသတင်းဆောင်းပါး (Photo: the Voice) ********************* General Elections Commission (KPU) on July 8, 2014 at 9:14 am Wealth announced by election commission (here – converted to US$). Prabowo Subianto owner of 20 business companies which worth US $147.7 millions. While Jokowi wealth is US$ 1.6 million. Indonesia politician has to declare their wealth. Winner will most likely be known tomorrow evening. Election survey LSI poll ,Jokowi lead 46-42 per cent. But late surge – retired general Probowo could win by 53-47 per cent. Link http://mingalaronline.biz/stories/jokowi.role.model.htm ******************* This story, posted at Moemaka အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားစတိုင် အင်ဒိုနီးရှားခေါင်းဆောင် (Published at Moemaka Magazine & the Voice news paper in Yangon) http://mingalaronline.biz/stories/jokowi.role.model.htm 5/10
16. 9/28/2014 JOKOWI Indonesia JOKOWI ပိုစတာဖြစ်ပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှား၊ လက်ရှိ ဂျာကာတာမြုေိတ်ာဝန် ဂျိုကဝီုဟုလူသမျိားပြီး၊ အင်ဂျ င်နီယာတစ်ဦးလဲ ဖြစ်ပါသည်။ လောလောဆယ် ၁၃ ဇနဝ္နါရီ၂၀၁၄ ဂျာကာတာ ရေလမွှ်းမိးုကာ အမ်ိပေါင်း ၇ထောင်ကျေ်ာ ရေမြုတ်နေပြီး၊ လူပေါင်း ၂၅၀၀၀ ရေဘေးဒုက္ခရောက်နေပါသည်။ " ရေဆီးတားတွေ ပြင်ဖို့ ယန္တရားကြီးတွေနှင့် လပ်ုနေပါတယ်။ မြစ် ၁၃ခုမြုိ့ထဲစီးဝင်တဲ့ ရေတွေဖြစ်ပါတယ်။ ရေရှည်မှာ ဒါမျုိးမဖြစ်အောင် အနီးနားက သစ်လပ်ုငန်းများက သစ်တောခုတ်လဲမျှား ရပ်ဆငိုးပြီး စမိ်းလန်းတဲ့ သစ်တောဖြစ်ဖို့ အစိးုရ၏ အကူညီလိုပါတယ်။ မြို့သူမြို့သားများလဲ မြောင်းများ မပိတ်ဆို့ဖို့ အမှိုက်စနစ်တကျ ပစ်ဖို့ လိုပါတယ်..." ဟု မြုိ့တေ်ာဝန် ဂျိုကဝီုကပြောပါသည် ။ ဒါတွေ လပ်ုဖို့ ဂျာကာတာမြုိ့အဖွဲ့နငှ့်မရပါ၊ ဗဟိုအစိးုရလည်း ပူးပေါင်းလပ်ုဆောင်ပေးဖို့ လေိုကြာင်း ပြောပါသည်။ ရေစုတ်ပန့်များစွာ အလပ်ုလပ်ုလျှက်ရှေိကြာင်း၊ ဂျာကာတာ မြို့နယ်ပေါင်း ၃၁ ခုမှာ ရေကြီးနေကြောင်း၊ ဂျာကာတာ ရဲဌာနမှ သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ သူ့ကိုဂျာဗားကျွန်းအလယ်က လဦူးရေ၅သနိ်းခန့်ရှေိသာ ရေှးဟောင်းမြုိ့တေ်ာ Surakarta မြုိ့တွင် ၁၉၆၁ မွေးဖွားခဲပ့ါသည်။ ယခု၅၂ နစ်ှအရွယ်ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၅ သစ်တောဆငိုရာ၊ အင်ဂျ င်နီယာဘွဲ့ရရြှိပီး နောက်ပငိုး ကမ္ပုဏီအလပု၊ အမ်ိထောင်ပရေိဘာဂ စီးပွားရေးလပ်ုငန်းများ အောင်မြင်စွာ လပ်ုခဲပ့ါသည်။ ဆူကရာတာမြုိ့ဝန် ရာထူး အတွက် သူ့ကို ယှဉ်ပြိုင်စေရာမှာ အနိုင်ရရှိပြီး ၂၀၀၆ ဆူကရာတာမြို့ဝန်ဖြစ်လာပါသည်။ သာမန် လပ်ုငန်းရင်ှတစ်ဦး မြုိ့ဝန်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နငိုပ့ါမလား သံသယဖြစ်ခြဲ့ကသည်။ လက်ရှိ အင်ဒနိုီးရှားသမ္မတ ယဒိူုယနိုမြုိ့ဝန်လပ်ုခဲဖ့ူးသော မြုိ့လည်းဖြစ်ပါသည်။ သူတာဝန်ယြူပီး မကြာခင် သူ့၏ အရည်အချင်များကိုတွေ့လာရပါသည်။ သူလပ်ုငန်းရင်ှအဖြစ် ဥရောပမြုိ့တေ်ာတေ်ာများများကိုရောက်ခဲစ့ဉ်က ထြိုမုိ့များ၏ ဖွံ့ဖြုိးရေး လပ်ုဆောင်မှုနမနူာများစွာအတုယြူပီဆူကရာတာမြုိ့အတွက် သင့်လျေ်ှာအောင် ကေ်ာပီ လုပ်ဆောင်စေပါသည်။ သူ နိုင်ငံခြား သွားလာနေစဉ်ကာလ သူများနိုင်ငံမှာ ဘယ်လိုလုပ်ကိုင်သည်ဆိုတာ သေသေချာချာ လေ့လာ၊ ဆည်းပူးခဲပ့ါသည်။ ထိုကဲ့သို့လေ့လာပြီး မှတ်တမ်းတင်မမျှုားသည် သူကိုယ်တငို မြုိ့တေ်ာဝန် ဖြစ်လာချန်ိတွင် လက်တွေ့ကျ င့်သံုး၊ အကောင်ထည်ဖေါ်နငိုခဲပ့ါသည်။ သူသည် ယခင် အင်ဒိုနီးရှားခေါင်းဆောင်များလို ဟိတ်ဟန်မရှိ၊ ပုံစံခြားနားပါသည်။ ပြည်ထုနှင့် တွေ့ဆုံပွဲများတွင် လူငယ်များက ဂျိုကိဝီ လက်ကိုဆွဲပြီး သူတို့ခေါင်းပေါ်တင်ကြပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားစတိုင် လူငယ်တွေက လူကြီးကိုလေးစားကြောင်း ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဆူရာကာတာမြို့ဝန်အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်လုပ်ဆောင်မှုများ - သူ့မိသားစုကိုမြုေိတ်ာ၏ ကန်ထရိုက်တွင် လံုးဝ၊ တင်ဒါမဆွဲခငိုးပါ။ အဂတိလိုက်စားမမှုရ၊ှိ သန်ရငှ်းခြင်း။ - မြို့၏ ရိုးရာမပျ က် ဈေးကြီးတည်ထောင်ပေးခြင်း၊ ဈေးဆိုင်များမှာ ရှေးဟောာင်းပစ္စည်းဆိုင်၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းဆိုင်များပါဝင်ပါသည်။ - မြုိ့လည်ခေါင် လမ်းမတွေကြား လမျူားလမ်းလျှောက်ဖို့ ၃မီတာကျ ယ်ပြီး၊ ၇မီတာရှည် လမ်းကိုတည်ဆောက်ပေးခြင်း - မြို့၏ ပန်းခြံကြီးနှစ်ခုကို စည်ပင်သာယာ၊ လှပအောင် အပမ်းဖြေစခန်းအဖြစ် ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း http://mingalaronline.biz/stories/jokowi.role.model.htm 6/10
17. 9/28/2014 JOKOWI Indonesia - မြို့ထဲမှ သစ်ပင်၊ သစ်ကိုင်းများ ခုတ်ခြင်းကို ဥပဒေဖြင့်တင်းကျ ပ်စွာ ထိန်းချုပ်ခြင်း - "ဂျာဗားစိတ်ဓါတ်" ဆိုင်းဘုတ်နှင့် ဂျာဗာကျွန်းယဉ်ကျေးမှုကိုမြငှ့်တင်ပြီး၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလပ်ုငန်း တိုးတက်စေခြင်း - မြုိ့ကိုဆွေးနွေးပွဲများ၊ ကွန်ဗင်းရငှ်းများ၊ ပြပွဲများ၊ ကြေ်ာငြာပွဲများ ဗဟိုအဖြစ် မြငှ့်တင်ပေးခြင်း - သူကိုယ်တိုင် မြို့အနှံ့အပြားအရောက်သွားပြီး၊ ဒေသခံလူများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် အပြစ်တင်ခြင်းကို ကိုယ်တိုင်နားထောင်ခြင်း - ကျ န်းမာရေးအာမခံ ထားခြင်းကို မြို့သူ၊ မြို့သား အားလုံး ပါဝင်စေခြင်း၊ - မြို့လူထု သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် ၂ထပ်၊ ဘတ်စ်ကားကြီးများ၊ မိုနို ရထားလမ်းများ ပြေးဆွဲစေခြင်း - Solo Techno Park စက်မဇှုံတစ်ခုတည်ဆောက်ပြီး အင်ဒနိုီးရှားလပု၊ မေ်ာတေ်ာကားများကိုမြငှ့်တင်ပေးခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။ "Solo: The Spirit of Java" ဆငိုးဘုတ် အောင်မြင်စွာ၊ လပ်ုဆောင်ခဲပ့ါသည်။ မြုိ့ထဲမှာရှေိသာ အဟောင်းပစ္စည်း၊ ဈေးဆိုင်အားလုံး မြို့ပြင် ဥယဉ်တခုဆီရွှေ့ခြင်းကို တဖြေးဖြေး၊ ညင်သာစွာ ရွေှ့ပြောင်းပေးခဲပ့ါသည်။ မြုိ့ကြီးများအင်္ဂျါနငှ့် အညီမြုိ့လည်မှာ သစ်ပင်များ စမိ်းစမိ်း၊ စစိုစိုက်ထားဖို့ နေရာများကိုဖန်တီးခဲပ့ါသည်။ မြုိ့လည်ခေါင်လည်း ပြန်လည် စမိ်းလန်းစေိုပြ လာပါသည်။ မြုိ့ကမ့္ဘာအဆင့်မီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် စီးပွားရေးသမားများပါဝင်လာရာတွင် မမှန်ကန်သော ရင်းနှီးမြှတ်နှံမှုများကို မြို့ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းများမှ ထုတ်ပယ်ပစ်ပါသည်။ မကြာခင် ၂၀၀၆ခုနှစ်မှာ ဆူကရာတာမြို့ကို ကမ့္ဘာယဉ်ကျေးမှုအမွေခံမြုိ့များအဖွဲ့အစည်း Organization of World Heritage Cities ၏ အသင်းဝင်အဖြစ် လက်ခံခဲပ့ါသည်။ ထို့နောက် ကမ့္ဘာအဖွဲ့အစည်း၏ ပွဲတေ်ာကြီးများ ဆူကရာတာမြုိ့မှာ ကျ င်းပခဲပ့ါသည်။ ၂၀၀၈မှာ ကမ္ဘာတေးဂီတပွဲတေ်ာကြီးကိုကျ င်းပနငိုခဲပ့ါသည်။ မြုိ့၏ သမငိုးဝင်မှတ်တမ်းတင်နေရာများကို မြငှ့်တင်ပေးပြီး၊ အသံုးမကျ တဲ့နေရာများကိုဘူတဇိုာနငှ့် တိုက်ဖျက်ဖို့ ဆံုးဖြတ်ချက်များစွာ ချမှတ်ခဲပ့ါသည်။ ဂျိုကိုဝီ ၏ စတိုင်မှာ "Can-do" လုပ်နိုင်ပါသည်.. ဆိုသည့်အတိုင်း၊ အောင်မြင်စွာ မြို့ရပ်မိဘများနှင့် ပူးပေါင်းလပ်ုဆောင်ခဲပ့ါသည်။ အထူးသဖြင့် လငူယ်များ၏ တခဲနက် လပ်ုအားပေးမမျှုား တွေ့ရပါသည်။ မြို့ရပ်လူထု ရွေးကောက်တင်မြှောက် ခံထားသူများ သွေးစည်းစေပြီး၊၊ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရာတွင်လဲ အောင်မြင်ပါသည်။ သူကိုယ်တငို အခက်အခဲများကိုပါဝင်၊ ကျေ်ာလွှားဆောင်ရွက်ပါသည်။ ၂၀၁၁ ခနုစှ် မြုိ့တေ်ာ မြူနစီပါယ်က လျ ပ်ှစစ်ဓါတ်အား ကေ်ာပေိုရးရငှ်းကိုဓါတ်အားခငွေ ကန်ဒေါ်လာ တစ်သန်းနီးပါး အကြွေး ပေးစရာရပှိါသည်။ ခရစ်စမတ်ပွဲကိုတမြုိ့လံုး ပျေ်ာရငွှ်စွာ ဆင်နွဲနေသည့် ညမှာ အစိးုရလျ ပ်ှစစ်ကေ်ာပေိုရးရငှ်းက မီးဖြတ်တောက်လိုက် ပါသည်။ မြုိ့ မြူနစီပယ်အဖွဲ့က အကြွေးပေးဖို့ ချက်ချင်းဆံုးဖြတ်ပြီး ထိုကဲ့သို့ အတင်းအကြပ် အကြွေးတောင်းတာမျုိး နငိုငံတေ်ာလျ ပ်ှစစ်ကေ်ာပေိုရးရငှ်းက နောက်နောင်မလုပ်ဖို့၊ မြို့သူမြို့သားများဖက်ကလည်း ပြန်ကြည့်သင့်ကြောင်း ကန့်ကွက်စာထုတ်ပါသည်။ ဒေါ်လာတစ်သန်းနီးပါး အင်ဒနိုီးရှားငွေများ အထပ်ုပေါင်းရာနငှ့်ချီစေုဆာင်းပြီး၊ လျ ပ်ှစစ်ဓါတ်အားကေ်ာပေိုရးရငှ်း ရံုးကို မြုိ့တေ်ာဝန် ဂျိုကဝီုကိုယ်တငို သွားပေးခဲပ့ါသည်။ ပြနဿာများ ခေါင်းခံစရာရှိလျ ငှ် ကိုယ်တငို ဝင်ရငှ်းပေးသူ ဖြစ်ပါသည်။ http://mingalaronline.biz/stories/jokowi.role.model.htm 7/10
18. 9/28/2014 JOKOWI Indonesia ဂျာကာတာမြို့ဝန်အဖြစ်ရွေးခံရခြင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ ၁၀သန်းရှိသော ဂျာကာတာမြို့ဝန် ရာထူးကို လက်ရြှိမုိ့တေ်ာဝန်နငှ့် ယဥှ်ပြုင်ိရာ အနိုင်ရရှိပြီး၊ အရွေးခံရပါသည်။ သူ၏မြို့ ဆူကရာတာမြို့ဝန် ရာထူးကိုလဲ မဲပေါင်း ၉၀%ဖြင့် ဒုတိယသက်တမ်း ဆက်အရွေးခံရသည့်အတွက် ဆူကရာတာမြို့ဝန်ရာထူးကို လက်ထောက်ဖြစ်သူ လွဲှေပးပါသည်။ အင်ဒနိုီးရှားနငိုငံ၏ မြုိ့တေ်ာကြီး ဂျာကာတာကိုပြုပြင်ပြောင်လဲဖို့ ပိုအရေးကြီးပါသည်။ ယခု ဂျာကာတာမြို့ဝန်အဖြစ် ရွေးကောက်ခံရပြီး၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်မှာလဲ ဘာမှထူးခြားစွာ မလပ်ုခဲပ့ါဘူး။ တခပဲု..သူ့၏ ပွင့်လင်းမြင်သာ စတငိုဖြစ်တဲ့ မြုိ့ရပ်၊ လူထမျုားနဲ့ ထေိတွ့ရ လမ်းကြားတွေထိသွာပြီး၊ စကားပြော၊ သူတို့၏ တိုင်တန်းချက်များကို နားထောင်ခြင်းကို ဆူကရာတာမြို့ဝန် လပ်ုခဲစ့ဉ်ကအတငိုးပါပဲ။ ဒနီည်းနငှ့် လမျူား အလပ်ုလပ်ုချင်စိတ်ကိုအားပေးလှို့ဆေ်ာပါသည်။ ရာထူးလက်ခံပြီး ရက်၁၀၀ အကြာမှာ ဂျာကာတာပိုစ် သတင်းစာကြီးက အရည်ချင်းရှိသူဖြစ်ကြောင်း၊ ထောက်ခံရေးသားပါသည်။ သူ့၏နည်းလမ်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ လုပ်ငန်းပေါ်လစီနှင့် လူထုဆီထိအောင် သွားရောက်ခြင်းသည် အလွန်ထေိရာက်ကြောင်း၊ သ၏ူ အခမဲ့ကျ န်းမာရေးပေါ်လစ၊ီ အခမဲ့ပညာရေးပေါ်လစမျီား၊ ဂျာကာတာမှာ မြေအောက်လငှိုဂူကားလမ်းကြီးဖောက်ရန်၊ မြုိ့တွင်း ကားကြပ်မှုအတွက် မြုိ့ထဲဝင်တဲ့ကားများ အခွန်ကောက်ခြင်း ERP စနစ် စတဲ့လပ်ုငန်းတွေမှာ အခက်ခဲများရှေိသ်ာလည်း ကျေ နပ်ကြောင်း၊ ဂျာကာတာမြုိ့သားများ၏ မန်ှကန်သော ရွေးချယ်မြှုဖစ်ကြောင်း ချီးကျူးခဲပ့ါသည်။ ဂျာကာတာမှာ ကျ န်းမာရေးအာမခံ ၂၀၁၂ စီမံကိန်းအကောင်ထည်ဖေါ်ရာ လူကြိုက်များလှပြီး ဆေးရုံများစွာက ပါဝင်လျှောက်ထားကြသည်။ လမျူားစွာ ပါဝင်ပြိး ဆေးကုသမခှုံယြူခင်းကြောင့် စရိတ် ၇၀% ပြိုပီးကန်ုကျ လာသည်။ ဆင်းရဲသားများကိုအဓိကထား အခမဲ့ဆေးကြုခင်းကိုလူလတ်တန်းစားတွေလည်း ဝင်ပြီးတန်းစီ၊ ကုသခံယူသည်။ နောက်ဆုံး လူတစ်ဦးစီ တန်းစီနေသော နေရာကို ဒေါ်လာ၁၅ နှုန်းနှင့် တန်းစေီရာင်းစား သည်အထိဖြစ်လာသောကြောင့် ဝငိုးအပြစ်တင်နေကြပါသည်။ မြုေိတ်ာဝန်ကတေ့ာ ခခုံပြောဆြိုပီး ယြုံကည်မနှုငှ့် ဆက်လပ်ုဆောင်လျှက်ရပှိါသည်။ သူက ဂျာကာတာမြုိ့၏ အပ်ုချုပ် ဗျူရိုကရက်ရေးအရာရြှိကီးများ ကိုစောင့်ကြည့်နေသည်ဟုဆပိုါသည်။ နာမည်ကျေ်ာ အဂတိလိုက်စားလှေသာ အင်ဒနိုီးရှားမှာ ရာထူးအရနှိ်နငှ့် ငွေချမ်းသာအောင် မလပ်ုသ၊ူ သန့်ရငှ်းသူအဖြစ် နာမည်ကျေ်ာပါသည်။ ၁၅နှစ်တာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာ ဒီနှစ် သန့်ရှင်း၊ ပွင့်လင်းသူ၊ အဂတိမလိုက်စားသူအဖြစ် သူ့ပါတီခေါင်းဆောင် မဂ္ဂါဝတီ ထက်ပင် လူကြိုက် အလွန်များနေပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုအင်ဒနိုီးရှားနငိုငံ သမငိုး အကောင်းဆံုးမြုိ့တေ်ာဝန် (၁၀)ဦးစာရင်းဝင် ဖေါ်ပြခံရပါသည်။ ၂၀၁၁ သမ္မတယဒိူုယနို၏ို ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုကိုရရခှိဲပ့ါသည်။ ၂၀၁၂ တွင် ကမ့္ဘာရာဇဝတ်မှုထေူပြာသောမြုိ့ကို ကမ့္ဘာအဆင့်မြုိ့အဖြစ် ပြောင်းလဲနငိုသည့်အတွက် 2012 World Mayor Prize ကမ့္ဘာမြုိ့တေ်ာဝန် တတိယဆုကိုရရခှြိဲ့ပီး၊ ၂၀၁၃ The City Mayors Foundation လစဉ်ကမ့္ဘာအကောင်းဆံုး မြုိ့တေ်ာဝန်ဆုကိုလဲ ရရခှိဲပ့ါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတရွေးကောက်ပွဲ ၂၀၁၄ http://mingalaronline.biz/stories/jokowi.role.model.htm 8/10
19. 9/28/2014 JOKOWI Indonesia လာမည့် ၂၀၁၄ ဇူလိုင်မှာ အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ ရှိပါသည်။ လက်ရှိသမ္မတ ယူဒိုယိုနို သည် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၄၊ ၂၀၀၉ ရွေးကောက်ပွဲ၂ခုစလုံးကို Democratic Party ပါတီနှင့် အနငိုရရခှိဲသြူ့ဖစ်ပါသည်။ အင်ဒနိုီးရှားနင်ိငံကိုပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ စနစ်အဖြစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီး၊ အဂတိတိုက်ဖြက်သူအဖြစ် နာမည်ရပါသည်။ ယခင်သမ္မတရွေးပွဲ ၂ကြမိ် အနငိုရခဲသ့၊ူ ယခု၂၀၁၄ တွင် အနားယရူမည် ဖြစ်ပါသည်။ သူ့၏ပါတီက သမ္မတလောင်း မကြေငြာသေးပါ။ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ ၆လကျေ်ာ မျှသာ လပိုါတေ့ာသည်။ အင်ဒနိုီးရှားနငိုငံတွင် ၅နစ်ှတစ်ကြမိ် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ လပ်ုပါသည်။ အမေရိကန်နငိုငံကဲ့သို့ ပါတမျီားက သမ္မတလောင်းကိုရွေးချယ်ရပါသည်။ ပြည်သူလူထုမဲဆနခ္ဒံယပွူဲလပ်ုပြီး၊ မဲတစ်ဝက်ကျေ်ာရသူကိုသမ္မတအဖြစ် ရွေးခံရပါသည်။ သို့မဟုတ်ရင် မဲအများဆံုးရတဲ့ ထပ်ိဆံုး၂ဦး ထပ်ပြုင်ိရပါသည်။ မြန်မာသမ္မတ ရွေးပွဲမှာ တစ်မူထူးပါသည်။ ဒ-ုသမ္မတ(၃)ဦးကိုစစ်တပ်နငှ့်လွှတ်တေ်ာ၂ခုက ရွေးပြီး ထိုအထဲမှတစ်ယောက်ကို မဲပေးရွေးစနစ်ပါ။ ပြည်သူများက သမ္မတ တိုက်ရိုက် ရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါ။ တရုပ်နိုင်ငံ ပုံစံ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိဂျာကာတာမြို့ဝန် ဂျိုကိုဝီ ၏ ပါတီမှာ Indonesian Democratic Party – Struggle ဖြစ်ပါသည်။ ပါတီခေါင်းဆောင်မှာ ယခင်သမ္မတဟောင်း မဂ္ဂါဝသီ ဖြစ်ပါသည်။ သူမက "၂ကြိမ်တိုင်တိုင် သမ္မတရွေးပွဲမှာ ရံှးုထားသည့်အတွက် ဒီတစ်ကြမ်ိမှာ အသက်လဲ ၆၇နစ်ှရြှိပြီဖစ်လို့ ဝင်မပြုင်ိတေ့ာပါဘူး..နောက်တက်လာတဲ့ ငယ်ရွယ်သူကို ပါတီကရွေးပါမယ်" ဟု ဖြေပါသည်။ လောလောဆယ် သူ့တို့ပါတီက ဂျာကာတာမြို့ဝန် ဂျိုကိုဝီ လြူကိုက်များလျှက်ရပှိါသည်။ မူဆလင်ဘာသာဝင် ဂျိုကဝီု၏ လူတန်းစားခွဲခြားမှုမရှေိကြာင်းကို သေူရွးထားသော လက်ထောက် ဂျာကာတာမြုိ့တေ်ာဝန်ကိုကြည့်ပါ။ ခရစ်ယန်၊ တရပ်ုအနွယ် Ahok ဆိုသ၊ူ လမျူုိးရေးခွဲခြားမမျှုားကိုခံစားနေရသြူဖစ်ပါသည်။ ဂျိုကဝီုသမ္မတအရွေးခံလျ ငှ် Ahok ဂျာကာတာမြုိ့ဝန် ဖြစ်မည်။ အင်ဒိုနီးရှားတွင် အစိုးရ၏ အဂတိတိုက်ဖျ က်ရေး KPK အဖွဲ့ရှိပါသည်။ မကြာခဏ အရေးယူမှုများနှင့် အဂတိပြဿနာ ကျ ဆင်းမသွားပဲ၊ ပိုဆိုးလာသလို ဖြစ်နေပါသည်။ ဂီတနှစ်သက်သော ဂျိုကိုဝီ လက်ခံယူလိုက်သည့် လက်ဆောင် Metallica တေးဂီတအဖွဲ့က လက်မှတ်ထိးုပြီး ပေးခဲသေ့ာ လျ စ်ှစစ် ဘေ့ာစ်ဂီတာ တစ်လက် ရှိပါသည်။ KPK အဖွဲ့က သိမ်းဆည်းလိုက်ပြီး ပြတိုက်မှာ လူထုကို ပြသထားပါသည်။ ဂျိုကိုဝီ က သူ့ကို သမ္မတ ဖြစ်ဖို့မြငှ့်တင်နေသမျူားကို.." ကျွန်တေ့်ာဘဝဟာ ရိးုစင်းလြှပီး ဘာမှထူးခြားမမှုရှိတဲ့အတွက် သမ္မတအဖြစ် မထိုက်တန်ပါဘူး ... ဟု ပြောဆိုပါသည်။ နစ်ှအနည်းငယ်အတွင်း ဂျိုကဝီုလြူကိုက်များလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သူ့ကိုသမ္မတအရွေးမခံရလျ င်ှလဲ ယိုယွင်းနေသော အင်ဒနိုီးရှားမြုိ့တေ်ာ ဂျာကာတာကိုကမ့္ဘာအဆင့် ပြုပြင်မည့် ပဂ္ဂုိုလ်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြည် မြုိ့ကြီးများ မန္တေလး၊ ပဂုံ၊ မေ်ာလမြုငိ်၊ တောင်ကြီး၊ မံရွုာ စတဲ့မြုိ့များမှာ ဂျိုကဝီု ကဲ့သို့သော အရည်ချင်းရှိသမျူားစွာ ရပှိါသည်။ ဂျိုကဝီုကဲ့သို့ မြုေိတ်ာဝန်များစွာ မြန်မာပြည်တွင် ပေါ်ထွက်လာဖို့.. မျေ်ှာလင့်ပါသည်။ ဇေ်ာအောင်(မံရွုာ) http://mingalaronline.biz/stories/jokowi.role.model.htm 9/10
20. 9/28/2014 JOKOWI Indonesia http://mingalaronline.biz/stories/jokowi.role.model.htm 10/10
21. 9/28/2014 Indo ex-Finance Minister 2014 ဒီမိုကရေစီ မြန်မာထက်၁၅နှစ်စောတဲ့အင်ဒနိုီးရှားက ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဟောင်း အင်ဒိုနီးရှားဒီမိုကရေစီ ၁၅နှစ်ကြာပါပြီ၊ ဗီယက်နမ် ၂၀နှစ်၊ တရုပ် ၂၄နှစ်လောက်ရှိပြီ၊ မြန်မာ၃နှစ်ကြာပြီ၊ ဒီလိုပဲ ငွေရင်ှတွေကကြီးစိးုတာပါပဲ။ အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေး ဂျေ့ာချဝ်ါရင်ှတန် ၈နစ်ှသမ္မတ စလပ်ုတနုးကလည်း၊ ဒီလိုငွေရှင်ကြီးတွေကို ကြီးစိုးလာလို့၊ သူဌေးကြီးများကိုအစိုးရပညာပေးခြင်းနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံစီးပွားရေး ပြန်လည်တည်ထောင်ခဲရ့ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာ ဂျ ပန်၊ဂျာမဏီတို့ စစ်ရံှးုကနုးကောက်စရာမရှေိတ့ာပေမဲ့၊ လေူတ်ာလေူကာင်းတွေ ခေါင်းဆောင်ကြတေ့ာ ၁၀နစ်ှအတွင် ကမ္ဘာထပ်ိတန်းကိုပြန်ရောက်လာကြပါတယ်။ အင်ဒနိုီးရှားသမ္မတယဒူရိုနိုအဂတိတိုက်ဖျက်မယ် ကြွေးကြေ်ာ၊ ၂၀၀၅ခနုစ်ှမှာ သမ္မတဖြစ်လာပါတယ်။ သမ္မတက အလွန်တေ်ာတဲ့ စီးပွားပညာရငှ်၊ ဘယ်ပါတမှီလဲမပါတဲ့၊ စိတ်ဓါတ်ကောင်းမြတ်တဲ့ ကလေး၃ယောက်မိခင် Sri Mulyani Indrawati ကို ဘဏ္ဍရေးဝန်ကြီးခန့်လိုက်ပါတယ်။ ဒီအမျိုးသမီးဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားလို့ နာမည်ကြီးပါတယ်။ အရပ်သားပညာရှင်ဖြစ်ပြီး၊ စစ်တပ်၊ခရိုနီများနဲ့ ကင်းရှင်ပါတယ်။ အရမ်းတိုးတက်လာပါတယ်။ သူမ အင်ဒိုနီးရှားတက္ကသိုလ်မှာ စီးပွားရေးဘွဲ့ရရှိပြီး၊ အမေရိကန်၊ အီလနွီိုက်တက္ကသိုလ်က မာစတာနဲ့ပီအိတ်ဒီဒေါက်တာဘွဲ့ရရခှိဲပ့ါတယ်။ အချိန်ပိုင်းတက္ကသိုလ်ဆရာ ဖြစ်ပြီး၊ ကမ္ဘာငွေကြေးအဖွဲ့ IMF အရှေ့တောင်အာရှ ၁၂နိုင်ငံတာဝန်ခံ ဒါရိုက်တာလြူကီး လပ်ုနေစဉ်မှာ ၊ အဂတိတိုက်ဖျက်ရေးလပ်ုမဲ့ သမ္မတယဒူရိုနိုက ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးအဖြစ်၊ ပြက်သားစွာလပ်ုဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲပ့ါတယ်။ အဲဒီအမျုိးသမီးလက်ထက်မှာ အစကောင်းခဲပေ့မဲ့၊ စစ်အာဏာရင်ှနဲ့ခရနိုမျီားရဲ့ တွန်းအားဒဏ်ကို၅နစ်ှခံပြီး၊ အလပ်ုကထွက်သွားရပါတယ်။ ဒါလောက်တောင် လာဘ်စားမှုကိုတိုက်ခိုက်တဲ့၊ အာဂအမျုိးသမီးကြီးကိုငွေရငှ်၊ အာဏာရှင်အုပ်စုကြီးနဲ့ ၅နှစ်ကြာအောင် ခုခံ၊ကြိုးစားပြီး၊ နောက်ဆုံးအလုပ်က နှုတ်ထွက်သွားပါတယ်။ http://mingalaronline.biz/stories/indo.finance.minister.htm 1/3
22. 9/28/2014 Indo ex-Finance Minister 2014 သူမ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးလပ်ုတဲ့ ခေတ်ကာလမှာ၊ ပထမနစ်ှမှာပဲ နငိုငံခြားရင်းနှးီမှုFDI foreign direct investment $4.6 billon ရရခှိဲပ့ါတယ်။ နောက်နစ်ှမှာ $8.9 billion တိးုတက်ရရြှိပီး၊ Euromoney မဂဇ္ဂင်းရဲ့ တနစ်ှအတွင်းအကောင်းဆံုး ငွေကြေးစမီံခန့်ခွဲမှုဆုကရိုရခှိဲပ့ါတယ်။ ၂၀၀၈ ခနုစ်ှမှာ ကမ္ဘာကျေ်ာ Forbes Magazine ရဲ့ the most powerful woman in the world ကမ့္ဘာသြဇာအကြီးဆံုးအမျုိးသမီး အဆင့်၂၃ အဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲရ့ပါတယ်။ တငိုးပြည်အရံငွေကြေး US$ 50 billion အထိအမြင့်ဆံုးရောက်လာပါတယ်။ အကြွေး 60% of GDP ကနေ 30% အထေိလျ့ှာချနငိုခဲပ့ါတယ်။ နငိုငံခြားရင်းနှးီမြှတ်နှံသမျူားကိုယြုံကည်အောင်၊ ဥပဒေများပြုပြင် ဆွဲဆောင်ခဲပ့ါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဝန်ထမ်းများ၊ အထူးသဖြင့် အခွန်ဌာနဝန်ထမ်းများကို လောက်ငှအောင်၊ လစာနဲ့ခံစားခွင့်များ တိုးမြှင့်ပေးခြင်းနဲ့ လာဘ်စားမနှုည်းပါးစေခဲပ့ါတယ်။ သမ္မတယဒူရိုနိုဒုတိယအကြမ်ိရွေးကောက်ခံရတဲ့ ၂၀၁၀မှာ သမူကပိဲု ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ဆက်ခန့်ပါတယ်။ သူ့လက်ထက်မှာ ကုမ္ပဏီကြီးများနဲ့အခွန်ကောက်နိုင်ရုံမက၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ တဦးချင်းကြွယ်သမျူားစွာကိုလည်း အခွန်ကောက်နငိုခဲပ့ါတယ်။ ၅နစ်ှအတွင်း တစ်ဦးချင်းအခွန်ဆောင်တဲ့ ဝင်ငွေကောင်းသေူပါင်း ၄.၃သန်းကနေ ၁၆သန်းအထိအခွန်ဆောင်ဦးရေ တိးုတက်စေခဲပ့ါတယ်။ သူမ ၂၀၁၂မှာ ဝန်ကြီးရာထူးက ထွက်ခွာရခြင်းဟာ အင်ဒိုနီးရှားစီးပွားရေးအတွက် ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါ။ အထူးသဖြင့် အင်ဒနိုီးရှားမှာအကြွယ်ဝဆံုးဆိုတဲ့ Bakrie (အာဏရင်ှဟောင်း ဆူဟာတရိဲု့ လက်ရံုးဖြစ်တဲ့ ဂိုကာပါတီရဲ့ ဥက္ကဌ) နဲ့ငွေ-အာဏာရှင်များရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် လို့ဆိုပါတယ်။ အဂတိလိုက်စားမှု နည်းပါးရေးကိုသမ္မတယဒိူုယနိုက အထူးဆောင်ရွက်ခဲပေ့မဲ့၊ ထင်သလောက် မတိးုတက်ခဲပ့ါဘူး။ အစိးုရအဖွဲ့မှာ Barkrie လိုလမျူုိးက ရာထူးကြီးရနေပြီး၊ အဂတိတိုက်ဖျက်ရေးကေ်ာမရငှ် (KPK) ကိုလဲ သမ္မတက ကာကွယ်ပေးထားမှုမရှိတဲ့အတွက်၊ လပ်ုပငိုခွင့်မရပှိဲဖြစ်နေပါတယ်။ အထက်ပငိုး အရာရြှိကီးများစွာ လဘ်ပေးမှုနဲ့ ပတ်သက်နေခြင်းဟာ အခက်ခဲဖြစ်နေပါတယ်။ သူ့လက်ထက် ၂၀၀၈မှာ အာဏာရှင်ဟောင်း ဆူဟာတရိဲု့ သားတစ်ဦး တွမ်မီဆူဟာတိုTommy Suharto ထံက ဒေါ်လာ ၁၃၄သန်း၊်နငိုငံတေ်ာကို ပြန်အပ်ဖို့ အမနိ့်ထုတ်၊ ရယနူငိုခဲပ့ါတယ်။ သြူကွယ်ဖြစ်သူတွမ်မီဆူဟာတိုကလည်း ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကို တရားပြန်စွဲပါတယ်။ တွမ်မီ က လူ၂ယောက်ငှားပြီး တရားသူကြီးကို သတ်မှုနဲ့ ထောင်၁၅နှစ်ကျ ပြီး၊ လျေ့ှာရက်နဲ့ ၄နစ်ှအကြာလွတ်လာခဲပ့ါတယ်။ ဒီလိုငွေ-အာဏာရင်ှများစွာ ကြားးမှာ သန့်ရငှ်းသူ အစိးုရဝန်ကြီးအဖြစ် နာမည်ရခဲပ့ါတယ်။ ဝန်ကြီးအသစ်အဖြစ် အကြီးဆံုးဘဏ်ဖြစ်တဲ့ Bank Mandiri ရဲ့ အကြီးကဲ CEO Bank Mandiri ကိုခန့်ပါတယ်။ ဝန်ကြီးရာထူးက ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ လာဘ်စားမှုကင်းတဲ့ သမူကိုအတိုက်ခံများက၊ Bank Century ကယ်ဆယ်ခြင်းကို အမှုဆင်ပြီး၊ လာဘ်စားမှုနဲ့တရားစွဲဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။ သမ္မတ အကာကွယ်ရရှိတဲ့အတွက် တရားစွဲမခံရပါဘူး။ သမူရဲ့ နောက်အလပ်ုသစ်ကတေ့ာ ကမ့္ဘာဘဏ်-အင်ဒနိုီးရှားရဲ့ အကြီးကဲဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ကြီးရာထူးက အတိုက်ခံများကြောင့် ထွက်လိုက်ရပြီး၊ တရားစွဲခံရမဲ့အရေးကလဲ လွတ်မြောက်ခဲပ့ါတယ်။ အခုအင်ဒနိုီးရှားနငိုငံ သမ္မတသစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူလူထြုကားက တက်လာတဲ့ ဂျိုကဝီုဆိုသ၊ူ http://mingalaronline.biz/stories/indo.finance.minister.htm 2/3
23. 9/28/2014 Indo ex-Finance Minister 2014 ဂျာကာတာမြို့ဝန် နဲ့ သူဌေးနိုင်ငံရေးသမား၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ပရာဗိုဝို တို့ ယှဉ်ပြိုင်ကြပါတယ်။ အပြတ်အသတ် ဂျိုကိုဝီ အနိုင်ရမယ်လို့ မနှ်းထားပေမဲ့ အလွန်တေိုတာင်းတဲ့အချန်ိအတွင် ငွေ- အာဏာရင်ှများက၊ စစ်တပ်နဲ့လူထုအားပေးမှုကိုတမဟုတ်ချင်းရယနူငိုခဲပ့ါတယ်။ ပရာဗဝိုရိဲုဇ့နီးဟာ အာဏာရင်ှဟောင်း ဆူဟာတရိဲု့ သမီးတစ်ဦး ဖြစ်ပေမဲ့ ဒမီိုကရေစစီနစ်ကိုလိုလား၊ အားပေးသြူဖစ်ပါတယ်။ ဇူလငို၉၊ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အချနိ် ဂျိုကဝီုဖက်သားများက ၅၃-၄၈ ရာနနှုးနဲ့ အနငိုရတယ် ဆေိုပမဲ့၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ပရာဗိုဝို ဖက်သားများက သူတို့အနိုင်ရတယ်လို့ ကြေငြာပြန်ပါတယ်။ ဇူလိုင်၂၂ရက်မှာ ရွေးကောက်ကေ်ာမရင်ှက ကြေငြာမဲ့ ရလဒ်ကိုလိုက်နာဖို့၊ လောလောဆယ် နစ်ှဘက်အပ်ုစုထနိ်းသမိ်းကြဖို့ လက်ရှိသမ္မတ ရိုဒိုယိုနို က တစ်ဦးစီနဲ့တွေ့ဆုံတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးလပ်ုငန်းမှာ အခွန်ကောက်ခြင်း၊ အစိးုရပရဂျိုက်ကြီးများ စနစ်တကျ လပ်ုတဲ့အတွက် တငိုးပြည်စီးပွားတတ်လာပေမဲ့၊ လာဘ်စားမမျှုား အထူးသဖြင့် အဆင့်မြင့်အစိးုရပငိုးမှာ ငွေမဲခဝါချခြင်းများကြောင့် တိုင်းပြည်တိုးတက်မှု နည်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Sri Mulyani ဘယ်လောက်ကြုိးစားပေမဲ့ သမူရဲ့ နငိုငံဟာ ငွေကြေးခ၀ါချမှုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (The Financial Action Task Force- FATF) ရဲ့ စံနနှုးကမိုမှီတဲ့အတွက် (ငွေမဲ၊ အခွန်လွတ်နေသူတနည်းအားဖြင့် နငိုငံဘဏ္ဍာတွေ ခိးုယေူနတဲ့လေူတွ၊ အကြမ်းဖက်အားပေးတဲ့လေူတွ) အများပြားရှေိနတယ်လို့ သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။ ၂၀၁၂ မှာ ထငိုး၊ ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒနိုီးရှား၊ မြန်မာတို့ ငွေခဝါချတဲ့နငိုငံအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရပြီး အခု၂၀၁၄မှာ၊ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့မြန်မာ ၂နိုင်ငံ၊ နာမည်ပျ က်စာရင်း Black List ထဲကမထွက်နိုင်ပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ မြန်မာပြည်ထက် ၁၅နစ်ှစောပြီး ဒမီိုကရေစစီနစ်ပြောင်းလဲခဲတဲ့ အင်ဒနိုိးရှား၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအစိးုရလည်း ကမ့္ဘာဘဏ်၊ အငိုအမ်အက်၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့များရဲ့ အကြံပေးချက်နဲ့ ခေါင်းခံလပ်ုနငိုမဲ့ ထူးချွန်သူအရပ်သားဝန်ကြီးများ လိုအပ်ပါတယ်။ အမျုိးသားများ ငွေ-အာဏာပြုင်ိနေချန်ိမှာ ထူးချွန်သူအမျုိးသမီးက ကြားခံဖြန်ဖြေခြင်းနဲ့ တငိုးပြည်တိးုတက်ပေမဲ့၊ ငွေ-အာဏာရင်ှများရဲ့ ဒဏ်ကမိုခံနငိုတေ့ာ ရာထူးကထွက်လိုက်ရပါတယ်။ ပါတီစွဲမရှိပဲ သံမဏိစိတ်ဓါတ်ရှင်၊ အင်ဒိုနီးရှားဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး အမျိုးသမီးတစ်ဦးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလဲ သမူလိုထူးချွန်သူအရပ်သားတွေ အများကြီးရပှိါတယ်။ ဇေ်ာအောင် http://mingalaronline.biz/stories/indo.finance.minister.htm 3/3
24. 9/28/2014 B. J. Habibie - Wikipedia, the free encyclopedia Bacharuddin Jusuf Habibie 3rd President of Indonesia In office 21 May 1998 – 20 October 1999 Vice President none Preceded by Suharto Succeeded by Abdurrahman Wahid 7th Vice President of Indonesia In office 10 March 1998 – 21 May 1998 President Suharto Preceded by Try Sutrisno Succeeded by Megawati Sukarnoputri 1st Minister of Research and Technology of the Republic of Indonesia In office March 29, 1978 – March 16, 1998 Preceded by No Succeeded by Rahardi Ramelan Personal details Born 25 June 1936 B. J. Habibie From Wikipedia, the free encyclopedia (Redirected from Bacharuddin Jusuf Habibie) Bacharuddin Jusuf Habibie pronunciation (born 25 June 1936) was President of Indonesia from 1998 to 1999. His presidency was the third, and the shortest, after independence. Contents 1 Early life2Studies and career in Europe3Career in Indonesia4Member of Golkar5Vice presidency6Presidency 6.1 East Timor 6.2 Suharto's corruption charge 6.3 The economy 6.4 Social issues 6.5 Education 6.6 Political Reform 6.7 End of presidency7Post-presidency 8 Family9Notes 10 Further reading 11 External links Early life Habibie was born in Parepare, South Sulawesi Province to Alwi Abdul Jalil Habibie and R. A. Tuti Marini Puspowardojo. His father was an agriculturist http://en.wikipedia.org/wiki/B._J._Habibie 1/9